août 2021 – Ministère de la Jeunesse et des Sports
AMBATONDRAZAKA : FITSIDIHANA NATAON’DRAMATOA MINISITRA LEFITRA MISAHANA NY TANORA.
Nanohy ny fidinana ifotony tany Ambatondrazaka, Faritra Alaotra Mangoro toy izay efa nataony tany amin’ireo faritra hafa ny Minisitra lefitra misahana ny Tanora, Ramatoa Juliana RATOVOSON, anio 28 Aogositra 2021.
Nandritra ny fandalovany dia nisy ny fihaonany tamin’ireo manam-pahefana tao an-toerana izay niresahana momba ny paikady apetraka ho fampandrosoana ireo tanora zanaky ny faritra, izay ao anatin’ny laharampahamehan’ny fitondram-panjakana.
Nisy ny fampiofanana ireo tanora izay natao tao amin’ny Centre Regionale de la Jeunesse et des Sports (CRJS) Toamasina izay nifarana anio 27 Aogositra 2021.
Nandritra ny fidinana ifotony izay notanterahin-dRamatoa Juliana RATOVOSON Minisitra lefitra,Anio zoma 27 Aogositra dia tonga tao amin’ny CRJS Toamasina izy ary nanatrika ny fanolorana ny mari-pahaizana ireo mpiofana.
Notanterahina omaly 26 Aogositra 2021 ny fankalazana Rezionaly ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Tanora ho an’ny Faritra Analanjirofo.
An-kafaliana sy an-karavoana tanteraka no nandraisan’ireo tanora ny Minisitra lefitra misahana ny Tanora Ramatoa Juliana RATOVOSON tamin’ny fahatongavany tao an-toerana hanotrona izany. Anisan’ny tonga nanome voninahitra ity fankalazana ity ireo manam-pahefana isan-tsokajiny tao an-toerana.